Puntland oo soo saartay digniin culus oo ka dhan ah Dowlaa Federaalka. – Xogsoor News Network
Muuqaalka Ninkii ka danbeeyay Weerarkii Germalka oo lasoo bandhigay.
Dowladda Somaliya oo bilowday baaritaanka cudurka Coronavirus.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Maanta Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Ergayga Qaramada Midoobay ee u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya ee James Swan. Kulanka dhexmaray Xasan Sheekh iyo Ergayga Qaramada Midoobay ayaa waxaa looga hadlay Arrimo kala duwan, waxaana kamid ahaa xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda dalka iyo arrimo […]
Xildhibaanad Fowsiyo Yuusuf Aden Waan soodhaweynayaa Booqashada Farmaajo ee Magaalada Hargeysa waana.
DEGDEG:Dagaal xoogan oo goor dhow ka qarxay Beled-Xaawo
Boqortooyada Sacuudiga oo sheegtay in Bin Salman uusan la kulmeyn.